२०२२ को विश्वकपका लागि मरुभूमि हरियालीमा रुपान्तरण गरिंदै | Nagarik News - Nepal Republic Media
सबै तस्बिर: न्यूयोर्क टाइम्सबाट
३२ असार २०७५ ९ मिनेट पाठ
दोहा– सडक बाटोमा जीपीएस नेभिगेसन प्रणालीले काम नगर्नसक्ला। यो शहर घुम्दा स्क्रीनमा देखिने हरियो सडक रेखा आपसमा अमिल्दोसँग गाभिदा झुक्याउन पनि सक्छ। अनि रोबोर्टले दिने निर्देशनले त झनै झुक्याउन सक्छ।
मरुभूमिको देश कतारलाई आगामी विश्वकपका लागि हराभरा बनाइदैछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएपनि ढंग पुर्याइएको छैन। सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजनाको तयारीमा जुटिरहेको कतारले मरुभूमिमा पनि हरियाली फलाउँदैछ र आधुनिक प्रविधि उपयोगिताको संयोजन गरि विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न अहोरात्र खटिरहेको छ।
खनिज इन्धनमा धनी यो राष्ट्रले गएको २ दशकदेखि समृद्धि यात्रालाई तीव्र पारेको छ । चार वर्षपछि हुने फु्टबल महाकुम्भमा समृद्धियात्राको स्वाद विश्व जगतलाई पस्कन उसले कम्मर कसेको छ । घना शहर, त्यहाँ भित्रका गगनचुम्बी भवन र शहरी व्यवस्थापनले मानव र मेसिनको उत्कृष्ट संयोजनका प्रमाणहरू पेस गरिरहेको छ।
अबको चार वर्ष वास्तवमा कतारले विश्व समुदायको ध्यान खिचिरहने छ । करिब २६ लाख जनसंख्या रहेको कतारले सन् २०२२ मा १५लाख अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकलाई आतिथ्य दिने लक्षका साथ अघि बढिरहेको छ।
रुसले आयोजना गरेको विश्वकप आइतवार समापनसँगै अव इस्लाम मुलुक कतारले थुप्रै प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेेछ। कतार अझै कति रूपान्तरण होला? विश्वकप फुटबलका दर्शकले चाहेको वातावरण सृजना गर्न कतारी समाजले आवश्यक लचकता अपनाउन सक्ला? विश्वकप आयोजनाको जिम्मेवारी पाउने समयमा विश्व समुदायले शंका गरेका मानव अधिकारका सवाललाई कसरी सन्तुष्ट गराउला? भन्ने प्रश्न कतार सामु छन्।
पूर्वाधार विकासमा कतारले जवाफ दिएकै छ। सडक सञ्जाल विस्तार, सार्वजनिक यातायात, सपिङ मल, रंगशाला निर्माण र विस्तारका लागि कतारले विश्वभरबाट हजारौं श्रमिकलाई आवद्ध गरिरहेको छ। घाँस र ठूला ठूला रुख मरुभूमिमा लहलहाउन थालेका छन् । ‘परिवर्तन हरेक दिन भइरहेको छ,’ खलिफा रंगशालाका व्यवस्थापक महमद अहमेद भन्छन्, ‘वास्तवमा देशनै बृहत लक्षका लागि केन्द्रित भएको छ।’
मरुभूमिका हरिया चौर
उष्ण गर्मीबीच तीब्र गतिको सुख्खा हावाको अवस्था हेर्दा लाग्छ माथिबाट छरिएको पानीका थोपा मरुभूमिको जमिनमा नपुग्दै सुक्लान जस्तो । ‘दुई वर्ष पहिले यो मरूभूमि थियो,’ रुख र घाँसले हरियालीयुक्त क्षेत्र देखाउदै यासेर यर मूल्लाहले भन्छन्, ‘विश्वकपको रंगशाला सिगार्ने बोट विरुवा यहाँ तयार गरिदैछ।’ मूल्लाह अहिले विश्वकप तयारी अन्तरगत रुख विरुवा व्यवस्थापन समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कतार सजाउन यो समूहले देश विदेशबाट विभिन्न प्रजातिका करिब १० हजार विरुवा आयात गरेको छ। उनको नेतृत्वमा रहेको टोलीले नर्सरी तयार गरिरहेको छ । यहाँ उत्पादित विरुवा मरुभूमिका सडक किनारमा सजाइनेछ। गलैँचा विच्छाए जसरी घाँसका विरुवा रोपिएका छन् । अर्को एक समूहले फुटबल चौरमा विच्छाउने १२ प्रजातिका घाँसहरू परीक्षण गरिरहेको छ ।
कतारको तापक्रम पनि चासोको विषय छ । कतारले विश्व फुटबल महासंघ समक्ष रंगशालाको तापक्रम ७२ डिग्री फरेनहाइटमा राख्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। यस अनुरूप उसले न्यूनतम ६४ डिग्री फरेनहाइट सम्ममा राख्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेको छ।
श्रमको मुद्दा पेचिलो बन्दै
सन् २०१४ मा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले कतारमा आप्रवासी कामदारको अधिकार हनन् भइरहेको भन्दै कतार सरकारको आलोचना गर्यो। कतार सरकारले यसपछि श्रम विवाद सममाधान गर्न संगठनसँग सहकार्य गर्न सहमत भयो । श्रम संगठनले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, स्वतन्त्र श्रम बजारको मान्यता, श्रमिक वहिर्गमनका समस्यामा चासो राख्दै आएको छ। आलोचकहरूले भने श्रमिकका मुद्दाका समस्यामा अझै पर्ख र हेरको अवस्था रहेको बताएका छन् । खाडी मुलुकमा आप्रवासी कामदारको अधिकार कार्यक्रमकी निर्देशक वानी सरस्वथी भन्छिन्, ‘सन् २०१४ देखि कतारी अधिकारीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहिरहेका छौं ।’
कतारको २६ लाख आवादीमध्ये ३ लाख मात्र कतारी नागरिक हुन् र विश्वकप दौरान थप १० लाख मानिस फुटवल समर्थकका रूपमा कतारमा थपिनेछन् । वास्तवमा आफ्नै शैलीमा वाँचिरहेका कतारीका लागि आगन्तुकका गतिविधि व्यवधान पनि बन्न सक्ने अनुमान आलोचकहरुको छ। तर यसमा कतारी अधिकारीहरू भने त्यति ठूलो समस्या देख्दैनन् । ‘हामी अहिले नै अल्पसंख्यकका रूपमा रहदै आएका छौ,’ वितरण र विरासत (डेलिभिरी एण्ड लिगेसी) सम्बन्धी सर्वोच्च समितिका उपमहानिर्देशक नजियर अल खातेर भन्छन्, ‘हामी यस्ता समस्यामा बानी परिसकेका छौ। र हाम्रो संस्कृतिसँग मेल नखानेखालका आगन्तुक हुने कुरामा हामीले बुझेका छौै।’ उनका अनुसार कतारको संस्कृति बारे जानकारी गराउने सकेजति प्रयास गरिनेछ। त्यस्तै आगन्तुक प्रतिको आतिथ्यभावमा कुनै कमी हुन नदिइने प्रतिवद्धता उनी जनाउँछन् ।
बेला बेलामा कतार सरकारले आफ्नो मुलुकको छवि धमिल्याउने प्रयास गरेको अभियोगमा विदेशी पत्रकारहरूलाई पनि गिरफ्तार गर्ने गरेको छ। तर विश्वकपका सन्दर्भमा कतारले सहनशीलताको नीति लिने देखिन्छ । खातेर भन्छन्,‘ हामी सहनशील बन्दै गएका छौ र सन् २०२२ सम्ममा यो सहनशीलता बढ्दै जानेछ । ढुक्क हुनुहोस्।’ तर पनि रुसमा जस्तो विश्वकपको स्वच्छन्दता फुटवल प्रेमीले कतारमा पाउनेमा शंकै छ। सर्मथकका खुशीका लागि रुसले कतिपय कानुनका प्रावधान समर्थकका सन्दर्भमा लागू गरेन । फलस्वरुप समर्थकहरुले विहानैदेखि भेला भएर नाच गानसहित रमाउन पाए। मदिरा सेवनमा पनि रुसमा पछिल्लो दुई महिना केही लचकता अपनाइयो । तर कतारमा भने त्यस्तो स्वच्छन्दता केही कम हुने संकेत खातेर गर्दछन् । ‘मदिरालाई अन्य विश्वकप भन्दा हामी थप नियन्त्रित गर्नेछौ,’ खातेरले भने। न्यूयोर्क टाइम्सबाट
प्रकाशित: ३२ असार २०७५ १८:५३ सोमबार
चौविस घण्टामै थपिए २ सय ३९ कोरोना संक्रमित
पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ३९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ संक्रमितसंगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १८ सय ११ जना पुगेको छ। सोमबार सुदुरपश्चिमको डोटी जिल्लामा पनि संक्रमण देखिएपछि संक्रमित हुने जिल्ला ५९ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।